पूर्व प्रधानमन्त्री खनालका दुवै फोक्सोमा पानी | Nagarik News - Nepal Republic Media
खनालको उपचारमा डा. अर्जुन कार्की, डा. रक्षा पाण्डे र डा. राजु पंगेनीको टोली तथा आवश्यक अनुसार विशेषज्ञहरुबाट भइरहेको छ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ २०:०२ बिहीबार